कोरोना परीक्षण पछि एक्ल्याईएका ले कैलाशले अस्पताल बाटै हाम फालेर जीवन त्यागे, रिपोर्ट भने नेगे`टिभ ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/कोरोना परीक्षण पछि एक्ल्याईएका ले कैलाशले अस्पताल बाटै हाम फालेर जीवन त्यागे, रिपोर्ट भने नेगे`टिभ !
काठमाडौ । पछिल्ला दिनहरुमा कोरोना सं`क्रमणको आशंका हिनता`वोध मह`सुस गर्दै जीवन त्याग गर्नेहरु बढ्दैछन् । नेपालमा मात्रै नभएर विश्व भर यो समस्या देखिएको छ । खास गरी जहाँ कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लाई एक सामाजिक बहिष्काका रुपमा लिने गरिन्छ । यस्तै एक दुः खद घ`टना भारत राजस्थानको जयपुर बाट आएको छ ।
यहाँ एक कोरोनाको संक्रमण भएको डरका कारण एक व्यक्ति आफ्ना आफन्त सबै प्रियजनहरूलाई उदास बनाउँदै यो संसार बाट विदा भएका छन् । अस्पतालका अनुसार यहाँका ७८ वर्षीय कैलाशले आफ्नो जीवन त्याग गरेका हुन् ।
उनको दिमागमा कोरोनाको डर यति धेरै थियो कि अस्पताल भर्ना भएको १३ घण्टापछि उनी अस्पतालको छानाबाट हाम फा`ल्न बा`ध्य भएका थिए । जानकारी अनुसार ग`म्भीर घा`इते अवस्था`मा उनलाई तत्काल आइ सी युमा लगियो, जहाँ उनलाई मृ`त्यु घोषित गरियो । वृद्धको मृ`त्युले मानिसहरूलाई कोरोनाको डर बाट मु`क्त हुनुपर्ने ठूलो दबाब मह`सुस भएको छ ।मृ`तककी बुहा`रीले अस्पतालमा व्यवस्था ठीक नभएको आरोप लगाएकी छिन् ।
उनका अनु`सार ससुरा धेरै रिसाएका थिए । ससुरासँ गै उनीहरु पनि जान चाहन्थे, तर रोक्न बाध्य`ता बनाइयो । उनले भनिन्, ‘अस्पतालमा कुनै डाक्टर वा स्टाफ राम्रो सँग कुरा गर्दैनन् । हामीलाई सँगै बस्न अनुमति थिएन, भर्ना भईरहेको बेला उहाँ (ससुरा) धेरै दुः खी हुनुहुन्थ्यो ।’
जेठो छोरो राति उनलाई भेट्न आएका थिए । सबैलाई भेट्न मिल्दैन, तर कै`लासको कम लक्षण र कुनै रिपोर्ट नभएका कारण छोरा लाई भेट्न अनुमति दिइयो । यस पछि, छोरा घर गए । छोरोसँगको भेटपछि उनी डिप्रे`सनमा आएर रातभर सुत्न सकेनन् । अस्पताल प्रशासन भन्छ, ‘हाम्रो अस्पता`लमा पूर्ण सुरक्षा छ, वृद्ध बाथरूम बाट कुदेका थिए । आपतकालीन उपचारको क्रममा उनको मृ`त्यु भयो ।’
कैलाश कोरोना संक्र`मणको आशं`का गरिएका व्यक्ति थिए । तर उनको मृ`त्यु पछि आएको रिर्पोटमा उनी कोरोना संक्र`मित पाइएनन् । उनी महामा`रीको डरले नकारा`त्मकताले घेरि`एका थिए । उनलाई अस्प`तालमा एक्लै छोडियो । उनको रिपोर्ट बुध`वार बि`हान नक`रात्मक आयो । यसको अर्थ यदी उनी जिउँ`दो भएको भए बिही`बार (आज) डिस्चार्ज हुन्थे । छोरा र बुहारीका अनुसार बिरामी वृ`द्ध अस्पता`लको व्यवस्था र स्टाफ`हरुले देखा`एको व्यव`हारका का`रण दुःखी थिए ।
कोरोनाबाट आमा गु`माएका १२ दिने शिशु आइसो लेसनमा !